သကြားဓာတ်သည်ကမ္ဘာ့သကြားထုတ်လုပ်မှု၏ ၆၅-၇၀% ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်သည်ရေနွေးငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများစွာလိုအပ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်အကြွင်းအကျန်များစွာကိုထုတ်ပေးသည် မှာ တချိန်တည်းမှာပဲ.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ sucrose ထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံတစ်ရာကျော်ရှိသည်။ ဘရာဇီး၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနှင့်သြစတြေးလျတို့သည်ကမ္ဘာ့သကြားအဓိကတင်ပို့သည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဤနိုင်ငံများမှထုတ်လုပ်သောသကြားထုတ်လုပ်မှုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှု၏ ၄၆% ခန့်ရှိပြီးသကြားတင်ပို့မှုစုစုပေါင်းပမာဏသည်ကမ္ဘာ့တင်ပို့မှု၏ ၈၀% ရှိသည်။ ဘရာဇီးသကြားထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပို့ကုန်ပမာဏသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမနေရာတွင်ရှိနေပြီးသကြားဓာတ်နှစ်စဉ်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု၏ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်စုစုပေါင်းကမ္ဘာ့ပို့ကုန်စုစုပေါင်း၏ ၆၀% ရှိသည်။
သကြား / ကြံဘေးထွက်ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းမှု
ကြံပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုတွင်သကြားဖြူနှင့်သကြားအညွန့်ကဲ့သို့သောအဓိကထုတ်ကုန်များ မှလွဲ၍ အဓိကဘေးထွက်ပစ္စည်းများ ၃ ခုရှိသည်။ သကြားကြံ bagasse, ရွှံ့စာနယ်ဇင်းနှင့် blackstrap သကာရည်.
Bagasse ကြံဖျော်ရည်ကိုထုတ်ယူပြီးနောက်သကြားကြံကနေ fibrous ကျန်ကြွင်းဖြစ်ပါတယ်။ သကြားကြံ bagasse ကိုအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် bagasse သည်စင်ကြယ်သောဆဲလူးလူးစ်နီးပါးဖြစ်ပြီးအာဟာရများမပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည်ဓာတ်မြေသြဇာမဟုတ်သောကြောင့်အခြားအာဟာရများထည့်ရန်အလွန်လိုအပ်သည်၊ အထူးသဖြင့်အစိမ်းရောင်ပစ္စည်းများ၊ နွားမ၊ ပြိုကွဲသည်။
သကြားထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကကျသောအရာတစ်ခုဖြစ်သော Press ရွှံ့သည်သကြားကြံ၏ဖျော်ရည်ကိုစစ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်သန့်စင်ခြင်းဖြင့်ကျန်ရှိနေသောကြံကြံ၏အလေးချိန်၏ ၂% ရှိသည်။ ၄ င်းကိုကြံကြံမြေရွှံ့၊ ကြံစိုက်မြေမှုန့်ရွှံ့၊ ကြံမှုန့်အကန့်များရွှံ့၊
စစ်ထုတ်ထားသောကိတ်မုန့် (ရွှံ့) သည်သိသာသောညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးသကြားစက်ရုံအတော်များများတွင်ယင်းကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်ခြင်းပြproblemsနာများဖြစ်စေသည်။ အမှိုက်များကိုစီစစ်ခြင်းဖြင့်လေထုနှင့်မြေအောက်ရေကိုညစ်ညမ်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်သကြားစက်ရုံများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးဌာနများအနေဖြင့်သတင်းစာရွှံ့များသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်အရေးပေါ်ကိစ္စဖြစ်သည်။
စင်စစ်အားဖြင့်အပင်များအာဟာရအတွက်လိုအပ်သောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများနှင့်ဓာတ်သတ္တုများပါဝင်သောကြောင့်ဘရာဇီး၊ အိန္ဒိယ၊ သြစတြေးလျ၊ ကျူးဘား၊ ပါကစ္စတန်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ၎င်းသည်ကြံစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်အခြားကောက်ပဲသီးနှံများစိုက်ပျိုးခြင်းတွင်ဓာတ်သတ္တုဓာတ်မြေသြဇာကိုလုံးဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစားထိုးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
၏ Filter တန်ဖိုးသည် Mud ကို Compost Fertilizer အဖြစ်အသုံးပြုသည်
သကြားအထွက်နှုန်းနှင့်ရွှံ့ filter (အချိုး ၆၅%) အချိုးသည် ၁၀း၃ ခန့်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၁၀ တန်ထုတ်လုပ်မှုသည်ခြောက်သွေ့သောရွှံ့မြေတစ်တန်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သကြားထုတ်လုပ်မှုစုစုပေါင်းသည် ၀.၁၇၂ ဘီလီယံရှိပြီးကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှု၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုဘရာဇီး၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်နှစ်စဉ်ရွှံ့မြေတန်ချိန် ၅ ဒသမ ၅ သန်းခန့်ထုတ်လုပ်သည်။
ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုမသိရှိမီရွှံ့ဖြင့်နှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စီမံရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းချက်ကိုတွေ့ရှိရန်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
BOD (၂၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၅ ရက်)
အပေါ်မှကြည့်ပါက Press ရွှံ့သည်အော်ဂဲနစ်ကာဗွန်၏ ၂၀-၂၅% အပြင်ကြီးမားသောအော်ဂဲနစ်နှင့်တွင်းထွက်အာဟာရများပါ ၀ င်သည်။ Press ရွှံ့သည်ပိုတက်ဆီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်နှင့်ဖော့စဖရပ်တို့ပေါများသည်။ ၎င်းသည်ဖော့စဖရပ်နှင့်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကြွယ်ဝသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အစိုဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီး၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိသောဆွေးဓာတ်မြေသြဇာဖြစ်လာသည်။ အသုံးများသောနည်းစနစ်များတွင်ဓာတ်မြေသြဇာအတွက်အသုံးများသည်။ ၎င်း၏ဓာတ်မြေသြဇာတန်ဖိုးကိုတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုဖြစ်စဉ်များ
ဆွေး, အဏုဇီဝသက်ရှိနှင့်အတူကုသမှုနှင့် distillery effluents နှင့်အတူရောနှောပါဝင်သည်
သကာရည်သည်သကြားကြည်လင်သော centrifuging ပြုလုပ်ရာတွင် c-grade သကြားနှင့်ကွဲထွက်သောဘေးထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ကြံတစ်တန်လျှင်သကာရည်အထွက်နှုန်းသည် ၄ ​​မှ ၄.၅% အထိရှိသည်။ ၎င်းကိုစက်ရုံမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဖြစ်ပို့သည်။
သို့သော်သကာရည်သည်ပိုးမွှားအမျိုးမျိုးသို့မဟုတ်မြေဆီလွှာအတွင်းရှိပိုးမွှားအမျိုးမျိုးနှင့်မြေကြီးအသက်တာအမျိုးမျိုးအတွက်ကောင်းသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ သကာရည်တွင် ၂၇း၁ မှကာဗွန်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ပါဝင်ပြီး ၂၁% တွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောကာဗွန်ပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုတခါတရံမုန့်ဖုတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အီသနောထုတ်လုပ်ရန်၊ ကျွဲနွားတိရိစ္ဆာန်အစာတွင်လည်းကောင်း၊
ဂလူးကို့စ & ဖructose
Filter Press ရွှံ့နှင့်သကာရည်ဆွေးမြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
ပထမ ဦး ဆုံးသကြားပုံနှိပ်စက် (၈၇.၈%)၊ ကာဗွန်ပစ္စည်းများ (၉.၅%)၊ မြက်မှုန့်၊ ကောက်ရိုးအမှုန့်၊ ဂျာဗင်း၊ ဂျုံဘရန်၊ ဖွဲ၊ sawdust စသည်တို့၊ သကာရည် (၀.၅%)၊ စူပါဖော့စဖိတ် (၂.၀%)၊ ဆာလ်ဖာရွှံ့ (၀.၂%) ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောစပ်ကာမြေမျက်နှာပြင်အထက်အရှည် ၂၀ မီတာခန့်၊ အကျယ် ၂.၃-၂.၅ မီတာနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အမြင့် ၅.၆ မီတာကိုပုံဖော်ခဲ့သည်။ (အကြံပြုချက်များ - Windrow အမြင့်၏အကျယ်နှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။ သင်အသုံးပြုနေသောဆွေး Turner ၏ parameter သည်ဒေတာ)
ဤလိပ်ခေါင်းများကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အစာခြေခြင်းလုပ်ငန်းကို ၁၄-၂၁ ရက်အတွင်းပြီးစီးရန်အချိန်ပေးခဲ့သည်။ ပုံသွင်းနေစဉ်အရောအနှောသည်အစိုဓာတ်ကို ၅၀ မှ ၆၀% အထိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်သုံးရက်တခါတိုင်းရောနှော၊ လှည့ ်၍ ရေလောင်းခဲ့သည်။ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောနှောခြင်းမှဖြစ်စဉ်ကိုလှည့်ရန်ဆွေးတာနာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ (အကြံပေးချက်များ: ဆွေး windrow Turner သည်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်သူကိုရောနှောပြီးအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်အကျိုးရှိပြီးလိုအပ်သောကြောင့်ဆွေးကိုလျင်မြန်စွာလှည့်ပါ)
အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားပါကအချဉ်ပေါက်ခြင်းသည်ကြာရှည်သည်။ ရွှံ့ထဲ၌ရေပါဝင်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်မပြည့်စုံသောအချဉ်ပေါက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဆွေးရင့်ကျက်ခြင်းရှိမရှိမည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်နည်း။ ရင့်မှည့်သောဆွေးသည်ပုံသဏ္looseာန်အလွတ်၊ မီးခိုးရောင် (taupe သို့ pulverized) နှင့်အနံ့မရှိပါ။ ဆွေးနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်အကြားတသမတ်တည်းအပူချိန်ရှိပါသည်။ ဆွေး၏အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု 20% ထက်နည်းသည်။
အချဉ်ဖောက်ပစ္စည်းထို့နောက်သို့ပို့သည် နယူးအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ granulator granules ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်။
◇ခြောက်သွေ့ခြင်း / အအေးခံခြင်း
အဆိုပါ granules ကိုစလှေတျပါလိမ့်မည် Rotary စည်ခြောက်သွေ့စက်ဒီမှာသကာ (စုစုပေါင်းကုန်ကြမ်း၏ ၀.၅%) နှင့်ရေခန်းခြောက်စက်ထဲသို့မဝင်မီရေဖြန်းသင့်သည်။ ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်များအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသော rotary drum dryer ကိုအပူချိန် ၂၄၀-၂၅၀ at တွင် granules များနှင့်အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကို ၁၀% အထိလျှော့ချရန်အသုံးပြုသည်။
ဆွေး၏ granulation ပြီးနောက်ကပို့သည် rotary စည်မျက်နှာပြင်စက်။ ပျမ်းမျှအရွယ်အစားဇီဝဓာတ်မြေသြဇာသည်လယ်သမားများ၏လွယ်ကူမှုနှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအမှုန့်များအတွက် ၅ မီလီမီတာအချင်းရှိသင့်သည်။ အရွယ်အစားကြီးမားပြီးအလွန်သေးငယ်သော granules granulation ယူနစ်မှတဖန်ပြန်လည်အသုံးပြုနေကြသည်။
လိုအပ်သောအရွယ်အစားကုန်ပစ္စည်းကိုပို့သည် အော်တိုထုပ်ပိုးစက်, အလိုအလျှောက်ဖြည့်မှတဆင့်အိတ်၌ထုပ်ပိုးသည်အဘယ်မှာရှိ။ ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းဖို့မတူညီတဲ့toရိယာကိုပို့လိုက်တယ်။
သကြားစစ်ရွှံ့ဖြင့်ကုသသည့်အခါ၊ သေးငယ်သောဇီ ၀ သက်ရှိများသည်များပြားလာပြီးပantibိဇီဝဆေးများ၊ ဟော်မုန်းများနှင့်အခြားတိကျသော metabolites များထုတ်လုပ်သည်။ မြေဆီလွှာတွင်ဓာတ်မြေသြဇာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရောဂါပိုးမွှားများပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ပေါင်းပင်များကြီးထွားမှုကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်၊ ပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါခုခံမှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ပေါင်းပင်အစေ့နှင့်ကြက်ဥများကိုသီးနှံများသို့သယ်ဆောင်ပြီးသူတို့၏ကြီးထွားမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။
ကစော်ဖောက်ခြင်းကာလသည် ၇-၁၅ ရက်သာရှိသောကြောင့်ရွှံ့ဖြင့်အာဟာရများကိုဖြစ်နိုင်သမျှအကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။ အဏုဇီဝသက်ရှိများ၏ပြိုကွဲခြင်းကြောင့်၎င်းသည်စုပ်ယူရန်ခက်ခဲသောအရာများကိုထိရောက်သောအာဟာရများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ ရွှံ့ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသည်ဓာတ်မြေသြဇာစွမ်းအားကိုလျင်မြန်စွာဆွတ်ခူးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဓာတ်မြေသြဇာသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိသည်။
ရေရှည်အတွက်ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာတစ်ခုတည်းကို အသုံးပြု၍ မြေသြဂဲနစ်ပစ္စည်းများကိုတဖြည်းဖြည်းစားသုံးသည်၊ ထို့ကြောင့်အကျိုးရှိသည့်မြေဆီလွှာပိုးမွှားများလျော့နည်းစေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အင်ဇိုင်းပါဝင်မှုလျော့နည်းစေပြီး colloidal ကိုပျက်စီးစေပြီးမြေဆီလွှာကိုကျုံ့စေခြင်း၊ စိစစ်ထားသောရွှံ့အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာသည်သဲများ၊ ရွှံ့စေးများပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ရောဂါပိုးများကိုတားဆီးနိုင်သည်၊
အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာကိုအသုံးပြုပြီးနောက်သီးနှံများတွင်အမြစ်တွယ်နေသောစနစ်ရှိပြီးခိုင်ခံ့သောသစ်ရွက်မျိုးများရှိပြီး၎င်းသည်ကောက်ပဲသီးနှံအပင်ပေါက်ရန်အတွက်၊ ကြီးထွားမှု၊ ပန်းပွင့်ရန်၊ ၎င်းသည်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ၏အသွင်အပြင်နှင့်အရောင်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်၊ ကြံကြံနှင့်သစ်သီးချိုသောပမာဏကိုတိုးစေသည်။ ရွှံ့ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာကိုအခြေခံအထွေထွေနှင့်အ ၀ တ်အစားအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ကြီးထွားလာရာသီအတွက်, အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏကိုလျှောက်ထားပါ။ ၎င်းသည်သီးနှံကြီးထွားမှုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးမြေယာစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်ရှိနိုင်သည်
သကြားကြံ၊ ငှက်ပျောသီး၊ သစ်သီးပင်၊ ဖရဲသီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ လက်ဖက်ပင်၊ ပန်း၊ အာလူး၊ ဆေးရွက်ကြီး၊